कार्तिक १९ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल | Bharosha News
Home राशिफल कार्तिक १९ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल
कार्तिक १९ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल
बिहानको समय राम्रो रहेकोले सानो लगानीबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । पारिवारिक माहोलमा जमघट भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला कष्टकर नहोला भन्न सकिन्न । आफन्त तथा दाजुभाईसँग मनमुटाब सिर्जना हुनेछ । प्रेममा अबिस्वास बढ्ने योग रहेकोछ ।
समय राम्रो रहेकोले धार्मिक तथा सामाजिक काममा मन जानेछ भने छोटो दुरिको धार्मिक यात्रा हुनेछ । आफन्त,मित्र,तथा कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ । पारिवारिक माहोलमा जमघट भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । बन्द व्यापार तथा साझेदारी व्यावसायबाट मनग्गे धन लाभ लिन सकिनेछ । राजनीति तथा सामाजिक काम गरि नाम कमाउन सकिनेछ ।
अवसर आए पनि तपाईँ आफ्नै कारणले काममा पछि परिनेछ । मनमा द्विविधा बढ्नाले निर्णय क्षमता कमजोर हुनेछ । आश्वासन दिनेहरूले झुक्याउन सक्छन ध्यान दिनुहोला । शुभ चिन्तकहरूले आफ्ना कमजोरी थाहा पाई आलोचना गर्न सक्छन् । स्वास्थ्यका लागि खानपान र वाहिरी वातावरणमा प्रति सचेत रहनुहोला । अनावश्यक भेटघाटमा अलमलिनाले काममा बाधा पुग्नेछ । तापनि पारिवारिक जमघटले दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले आम्दानिका नयाँ नयाँ स्रोतहरु फेला पर्ने तथा व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । सरकारि धन सम्पति तथा पैत्रिक सम्पति हातलागि हुने योग रहेकोछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो हुनेको साथै ईच्छित मनोकामनाहरु पुरा हुनेछन् । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले घर परिवार तथा छिमेकमा अनाबस्यक बिवादमा परिनेछ । काम गर्दा ध्यान दिनुहोला दण्ड तथा जरिवाना तिर्नु पर्ला । बैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धीत काम फस्टाएर जानेछ ।
औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धीत व्यावसाय फस्टायर जानेछ भने पानी तथा खनिज पदार्थको कारोबारबाट प्रशस्त आम्दानि हुनेछ । अध्ययनमा मन जाने हुनाले बिद्यामा प्रगति हुनेछ । प्रेम प्रशङगमा सफतला प्राप्त हुनेछ । दाजुभाई बाट तपाईको काममा आर्थिक सहयोग हुनेछ । तरपनि खानपिन तथा बाहिरि बाताबरणको ख्याल गर्नुहोला । साना तिना स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउनेछन् ।
भूमि,वाहन तथा पैत्रिक सम्पती हात लागि हुने योग रहेकोछ । आफन्त तथा साथिभाईको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ । कृषि क्षेत्रमा लगानि गरि आम्दानी गर्न सकिनेछ । विशिष्ट व्याक्तिहरुसँग नजिक हुनाले तथा कृतिमानी काम गर्न सकिनेछ । प्रविधिको सहयोग मार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । साझपख राजनीति तथा सामाजिक काम गर्नेहरुका लागि समय मध्ययम रहेकोछ ।
समाजसेवा तथा कल्याणकारि काममा दिन बित्ने योग रहेकोछ । काम बन्नाले दिन उत्साहबर्धक रहनेछ । राजनीति तथा सरकारि काममा सफल भई नाम कमाउन सकिनेछ । धर्ममा मन जाने हुनाले धार्मिक स्थल तथा मन्दिर तिरको यात्रा गरि टिका तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । अध्ययन तथा लेखन क्षेत्रमा समय लगानी गरि आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले भौतिक सम्पतिको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले पारिवार तथा आफन्तका साथ भेटघाट हुने तथा मिष्टान्न भोजनमा साथ दिन कटाउन सकिनेछ । भौतिक सम्पति तथा मानव निर्मित बस्तुहरु हात लाग्नेछ । व्यापारमा थोरै समय दिदा पनि प्रशस्त नाफा हुने योग रहेकोछ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले खानपान तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्ने तथा उपचार खर्च बढेर जाने देखिन्छ ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले पढाइ लेखाइमा राम्रो अंक ल्याई नतिजा हात पार्न सकिनेछ । उपाहार तथा भौतिक सम्पति हात लागि हुने योग रहेकोछ । सन्तान तथा छोराछोरीको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । मध्यान्हबाट कुनै मुद्दा मामिलामा सहभागि नहुनु होला न्यायिक निर्णयहरु आज तपाईँको पक्षमा नहुन सक्छ । आफन्त तथा मामा मावल िपक्षसँग मनमुटब बढ्ने योग रहेकोछ ।
बिहानको समय मध्ययम रहेकोले भातिक सम्पतिमा विवाद हुनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचना बढिनै हुनेछ । मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले आकस्मिक धन तथा सम्पति लाभ हुँने योग रहेकोछ । बंश बृद्धिको योग रहेकोछ भने सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउँनेछ । बैक तथा बित्तिय क्षेत्रसँग सम्बन्धीत व्यावसायमा लगानि गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले पराक्रम बढेर जाने हुनाले शाहशिलो काम गर्ने जागर आउनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जाने हुनाले अरुभन्दा अग्र पंत्तिमा तपाईकै नाम आउनेछ । माया प्रेममा रमाउने चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेकोछ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले सामाजिक काममा समय बित्ने भएपनि तपाईको डाहा गर्नेहरुले जनतामाझ अनावस्यक भ्रम तथा गलत म्यासेज लाने हुनाले आलोचनाको शिकार होईनेछ ।
Previous articleउपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १४६८ जनामा कोरोना पुष्टि
Next articleभारतीय सेनाध्यक्ष आज नेपाल आउँदै
नपालमा आज मात्र कोरोनाको कारण गयो यती धेरैको ज्यान !
५ भदौ, काठमाडौं- नेपालमा शुक्रबार थप ११ जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । योसँगै...
यस्ताे छ तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान,कुन-कुन प्रदेशमा छ वर्षाको सम्भावना ?
भाद्र २१ गते (आईतबार)दिउँसो : देशभर सामान्यतया बदली रहि केहि स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै...
काठमाडाैं । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अस्पताल भर्ना हुनुभएकाे छ । राष्ट्रपति ट्रम्पलाई वाल्टर रीड...